သားသားမီးမီးတွေအတွက် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေတဲ့ အစားအစာများ - Lifestyle Myanmar
Home Family သားသားမီးမီးတွေအတွက် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေတဲ့ အစားအစာများ
သားသားမီးမီးတွေအတွက် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေတဲ့ အစားအစာများ
ကလေးတွေဟာ သူတို့ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်အလေးချိန်က သဘာဝအားဖြင့် တိုးလာလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးအများစုက ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ရှိပေမယ့် တချို့က မျိုးရိုးဗီဇအရ ပိန်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်က ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလုံးစုံကျန်းမာရေးနှင့် အကုန်သက်ဆိုင်နေတာ မဟုတ်ကြပေမယ့် ကလေးတွေမှာ နိုင်ငံတကာ BMI စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှုန်းဖြင့် စံနမူနာ ကိုယ်အလေးချိန် ရှိဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ကလေးရဲ့ BMIဟာ (underweight) ပုံမှန်အောက်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျတဲ့ အမျိုးအစားမှာ ရှိလျှင် သူတို့ကို ကိုယ်အလေးချိန်တိုးဖို့ ကူညီပေးတဲ့ အစားအစာတွေ ကျွေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ သားသားမီးမီးတွေအတွက် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေတဲ့ အကောင်းဆုံးအစားအစာ စာရင်းကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။
သားသားမီးမီးတွေအတွက်မှာ စံနမူနာကိုယ်အလေးချိန်က ဘာဖြစ်သင့်သလဲ?
အမေရိကန် ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာရဲ့ အဆိုအရ ကလေးရဲ့ စံပြကိုယ်အလေးချိန်ကို သူတို့ရဲ့ BMI (Body Mass Index) ဖြင့်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ BMI ကို ခြေရာကောက်ဖို့ BMI တွက်နည်း ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့အလုံးစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် ကျန်းမာတဲ့အစားအစာများကို ကျွေးရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်ပုံမှန်အောက်လျော့ကျသူတွေအတွက် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေတဲ့ အစားအစာများကို ကျွေးရပါမယ်။
ကလေးအတွက် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေတဲ့ အစားအစာများ
ကလေးအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတဲ့ အစားအစာများက သွားရေယိုစရာဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မြေပဲယို၊ ဖျော်ရည်ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ဂျုံပေါင်မုန့် ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အစားအသောက်ဖြစ်ရပါမယ်။ ကလေးကို ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတချို့ကတော့
ကြက်ဥက အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီး ပရိုတိန်းကြွယ်ဝတာကြောင့် သင့်ကလေးရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိခြင်းမှာ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဥက ခန္ဓာကိုယ် တစ်ရှုးနှင့် ကြီးထွား ကြွက်သားတွေ တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ကြက်ဥကို ကောင်းကောင်းပြုတ်ပြီး ကလေးငယ်ကို ပမာဏနည်းနည်းစီ မိတ်ဆက်ပေးရပါမယ်။ ဖော့စဖောရက်၊ ပရိုတိန်း၊ ဇင့်နှင့် ကယ်လစီယမ်ကဲ့သို့သော အာဟာရများစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ကြက်ဥဟာ ကလေးတွေအတွက် စူပါအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်သားဟာ ကလေးတွေအတွက် ကယ်လိုရီနှင့် ပရိုတိန်းမြင့်မားတဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်နှင့် ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်တစ်ခုလုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာတို့ကို အကျိုးပြုပြီး သွားနှင့် အရိုးတွေကို အထောက်အကူပေးတဲ့ မရှိမဖြစ် သတ္တုဓါတ်တစ်ခုဖြစ်သော ဖော့စဖောရက်လည်း ကြွယ်ဝပါတယ်။ တစ်ရှုးကြီးထွားမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကြက်သားဟာ ကလေးငယ်တွေအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေပါတယ်။
ဆော်လမွန်ငါးမှာ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်၊ ဗီတာမင် B12၊ ဆီလီနီယမ်နှင့် choline တို့ပါဝင်တာကြောင့် ကလေးငယ်တွေမှာ အာရုံကြောကျန်းမာရေး၊ ဦးနှောက်နှင့် သိမြင်မှု လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ တိုးတတ်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ကူညီပေးပါတယ်။ တခါတရံမှာ သားသားမီးမီးတွေအတွက် အရသာရှိတဲ့ ဆော်လမွန်ငါးတစ်ခွက် ချက်ပြုတ်ပေးခြင်းက အိုင်ဒီယာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တို့ဖူးမှာ ပရိုတိန်းနှင့် မရှိမဖြစ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ၎င်းက ကယ်လစီယမ်၊ အပင်အခြေခံသံဓါတ်၊ မန်းဂနိစ်၊ ဖော့စဖောရက်နှင့် ဆယ်လီနီယမ်ရဲ့ အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရသိပ်သည်းတဲ့ အစားအစာဖြစ်ပေမယ့် ကယ်လိုရီနည်းပါးပါတယ်။ တို့ဖူးဟာ ကလေးတွေ ကြီးထွားဖို့အတွက် ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာ အဆီနှင့် ပရိုတိန်းမြင့်မားပါတယ်။
ထန်းလျက်ဟာ မသန့်စင်ရသေးတဲ့ သကြားပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ကြံရည်နှင့် စွန်ပလွန်ကနေ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ထန်းလျက်ဟာ သန့်စင်ပြီးသကြားထက် ပိုကျန်းမာပါတယ်။ ထန်းလျက်မှာ သံဓါတ်အပါအဝင် မရှိမဖြစ် သတ္တုဓါတ်တွေလည်း ကြွယ်ဝပါတယ်။ ကလေးကို ကျွေးတဲ့အခါ အော်ဂဲနစ် ထန်းလျက်ကိုသာကျွေးပါ။ တချို့ မိဘတွေဟာ ထမင်းကို ဆီလေးဆမ်းပြီး ထန်းလျက်နဲ့ ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်တာကြောင့် မေမေတို့လည်း တခါတလေ ကျွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သကြားအစားထိုးဖြစ်တဲ့ ပျားရည်ဟာ ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးမှုကို အားပေးတဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် 82% နှင့် ရေ17%တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဆီပါဝင်မှုနည်းပြီး သဘာဝ အချိုအရသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ပေါ်မှာဆမ်းပြီး ကျွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နို့က ပရိုတိန်းအရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးမှာ lactose intolerant ဆိုတဲ့ နွားနို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းအစားအစာနှင့် ဓါတ်မတည့်တာ၊ နို့သောက်ပြီး ဝမ်းလျောတဲ့ ပြဿနာ မရှိလျှင် နေ့စဉ် နွားနို့ တစ်ခွက်တိုက်ပေးခြင်းက ကျန်းမာသော အစားအသောက်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းမှာ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ နွားနို့မှာ အရိုးတွေကို သန်မာစွာတည်ဆောက်ပေးတဲ့ အဆီများ၊ ကယ်လစီယမ်နှင့် မရှိမဖြစ် ဗီတာမင်များ ပါဝင်ပါတယ်။
ကလေးအများစုက ဒိန်ချဥ်ကြိုက်ပါတယ်။ ၎င်းကို ဒီအတိုင်းကျွေးလို့ရသလို တစ်ခုခုနှင့် ရောပြီးကျွေးလို့လည်းရပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်မှာ ကယ်လစီယမ်နှင့် ပိုတတ်စီယမ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် ကလေးရဲ့ အရိုးကျန်းမာရေးကို တိုးတတ်စေပါတယ်။
၉။ သစ်သီးခြောက်များနင့် အခွံမာသီးများ
ရေခဲမုန့်ပေါ်မှာတင်ပြီးဖြစ်စေ၊ ဖျော်ရည်ထဲထည့်ပြီးဖြစ်စေ သရေစာအဖြစ် ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ သစ်သီးခြောက်နှင့် အခွံမာသီးမှာ almonds၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ သစ်ကြားသီး၊ တရုတ်ဇီးသီး စတဲ့အစေ့အဆန် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ သံဓါတ်၊ ဗီတာမင်များနှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်တို့ ကြွယ်ဝပါတယ်။
ပဲမျိုးစုံနှင့် ပဲနီလေးတို့မှာ ပရိုတိန်းဓါတ်ကြွယ်ဝပါတယ်။ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် ပဲ ၁၀၀ ဂရမ်မှာ ကယ်လိုရီ ၃၀၀နီးပါး ပါဝင်ပါတယ်။ ပဲမျိုးစုံဟာ စိတ်အပြောင်းအလဲကို ကုသပေးပြီး သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ ပျော်ဝင်အမျှင်ဓါတ် အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ အစားဇီဇာကြောင်သူဖြစ်လျှင် သူနှစ်သက်တဲ့ ပုံစံနှင့် ပဲကို ချက်ပြုတ်ကျွေးကြည့်ပါ။
ငှက်ပျောသီးမှာ အစာကြေဖို့လွယ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓါတ်မြင့်မားတာကြောင့် ဦးနှောက်စွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး အမြင်အာရုံကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးမှာ ပိုတတ်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် ဗီတာမင် B6 တို့ကြွယ်ဝတာကြောင့် သွေးအားနည်းတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်၊ ပိုတတ်စီယမ်၊ အဆီနှင့် အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် ထောပတ်သီးဟာ ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ရရှိမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးဟာ ဗီတာမင် B6 နှင့် C,E,K တို့ရဲ့ အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အလုံးစုံကျန်းမာရေးကို တိုးမြှင့်ခြင်းမှာ အကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ အိုမီဂါ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်၊ ဘီတာ ကရိုတိန်း၊ လူတိန်းတို့လည်း ပေးစွမ်းပါတယ်။
ပြောင်းဖူးက ကလေးတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းဖူးမှာ မျက်လုံးကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ carotenoids ကြွယ်ဝပါတယ်။ ပြောင်းဖူးဟာ ကလေးတွေ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးဖို့အတွက် အစွမ်းထက် အစားအသောက် substanceတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ ရောင်စုံလေးတွေ၊ သက်တန့်လေးတွေကို ချစ်ကြပါတယ်။ အသီးတွေမှာ ရောင်စုံကာလာလေးတွေ ရှိတာကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက် ကလေးတွေကို ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို အသီးကျွေးတဲ့အခါ တစ်ကိုက်စာလှီးပြီး နည်းနည်းစီကျွေးရပါမယ်။ နို့နည်းနည်းထည့်ပြီး အရသာရှိတဲ့ ဖျော်ရည်အဖြစ် ပြုလုပ်ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ သစ်သီးဖျော်ရည်မှာ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်များ၊ အာဟာရနှင့် အမျှင်ဓါတ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ နေ့စဥ်အစားအသောက်မှာ ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်။
၁၅။ ကန်စွန်းဥ နှင့်အာလူး
ကန်စွန်းဥနှင့် အာလူးမှာ သံ၊ ကယ်လစီယမ်နှင့် ဆီလီနီယမ်ကဲ့သို့သော ဗီတာမင် ဘီ၊ စီ၊ အမျှင်ဓါတ်နှင့် သတ္တုဓါတ်တို့ ကြွယ်ဝပါတယ်။ သူတို့မှာ အင်တီအောက်ဆီဒင့် မြင့်မားပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘီတာ-ကရိုတိန်းစုပ်ယူမှုကို တိုးတတ်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ကန်စွန်းဥကြော်က ပြင်ဆင်ဖို့ အလွယ်ဆုံး သရေစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အာလူးမှာ ဗီတာမင် အေ၊စီနှင့် အမျှင်ဓါတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် ကလေးတွေအတွက် ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လည်း ကြွယ်ဝပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ အရည်ရွမ်းတဲ့ အသီးအနှံတွေကို စားရတာ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အသီးအနှံက ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို အားကောင်းစေပြီး နာမကျန်းမှုကို ဆန့်ကျင် တိုက်ထုတ်ကူညီပေးပါတယ်။ ကလေး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကြီးထွားဖွံဖြိုးဖို့ အတွက် အမျှင်ဓါတ်မြင့်မားပြီး ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်နှင့် တခြားအာဟာရတွေပါဝင်တဲ့ အသီးအနှံတွေကို ကျွေးဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။
ကလေးတွေဟာ အသီးအရွက်စားရမှာ မကြိုက်ကြပေမယ့် ကြွပ်ရွပြီး အရသာရှိတယ်ဆိုရင် ကြိုက်တတ်ကြပါတယ်။ သင့်ကလေးက အသီးအရွက်စားဖို့ ဇီဇာကြောင်သူဖြစ်လျှင် ကလေးဗိုက်အရမ်းဆာနေတဲ့ အချိန်မှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှာ ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး အလုံးစုံ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အကူအညီပေးတဲ့ မရှိမဖြစ် အာဟာရဓါတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးကို ပေးတဲ့ အာဟာရအစားအစာတွေဟာ အရသာနှင့် စားချင်စဖွယ်ဖြစ်နေရပါမယ်၊။ သူတို့ရဲ့ အစာစားခြင်းအလေ့အထနဲ့ လူနေမူပုံစံမှာ အပြောင်းအလဲတစ်ခု ယူဆောင်လာခြင်းက သူတို့ကျန်းမာစွာကိုယ်အလေးချိန်တိုးဖို့ ကူညီယုံသာ မဟုတ်ဘဲ အစားအသောက် အလေ့အထကောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်းမှာ တာရှည်ခံတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ ကလေးကို ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာတွေကျွေးနေပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန်က အလုံအလောက်တိုးမလာဘူးဆိုရင် နားလည်တဲ့ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
မေမေတို့ရေ မေမေတို့ရဲ့ကလေးကို ကိုယ်အလေးချိန်တိုးဖို့ ဘာအစားအစာတွေကျွေးလေ့ရှိသလဲ? မှတ်ချက်လေးတွေ မျှဝေပေးသွားပါဦးနော်။
Previous articleသန်စွမ်းပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရရှိဖို့အတွက် အထိရောက်ဆုံး အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်း ၁၅ မျိုး
Next articleဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေဆို အလုပ်မခန့်ဘူးလို့ ပေါ်လစီအသစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ